यस्तो देश , जहाँ पुरुष माथि महिलाले गर्छन बलात्कार !
अधिकांश बलात्कारको घटनामा पुरष नै दोषी ठहरिने गर्छन् । हाम्रो सामाजिक व्यवस्था पनि यस्तै विभेदकारी छ । यस्तो पृष्टभूमीमा हुर्किएका हामीलाई यो कथा आश्चर्यलाग्दो लाग्न सक्छ, तुआरग जनजातिका महिलाहरुले भने पुरुषहरुसँग जवरजस्ती सम्बन्ध बनाउने गरेका छन् । यिनीहरु अफ्रिकीदेश नाइजरमा बसोबास गर्छन् । परपुरुषसँग यौन सम्पर्क स्थापित गर्नु उनीहरुको...
साबधान…सेक्स गर्दा यी गल्तीहरु नगर्नुस : जस्ले तपाइको ज्यानै जान सक्छ
सेक्स प्राकृतिक पक्ष हो र यो अपरिहार्य छ । एक अर्कामा समन्वय, समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गरिएको सेक्सले मानिसको जीवनमा सकारात्मक असर पुर्याउँदछ । पार्टनरको भावना बुझेर र तरिका मिलाएर गरिएको सेक्सले बढि आनन्द दिने गर्दछ तर, सही समय नआई चालिएको कदमले पुरै सेक्स मुड नै बिगार्न सक्दछ ।...
काठमाण्डौ – तपाईंको जति कोशिशगरे पनि महिला तपाईंसँग आकर्षित हुन्न । आखिरी किन ? यसका लागि तपाईं आफ्नो लुक्स र स्वच्छताप्रति काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । जान्नुहोस् कसरी तपाईं युवतीलाई आकर्षित गर्न सक्नु हुन्छ । राम्रो देखिनु तपाईंको हातको कुरा हो ,आफूलाई राम्रो देखाउन तपाईंको हातको कुरा हो ।...
कक्षा १२ पढ्ने युवतीमा अत्याधिक ‘यौन” लत ?
काठमाण्डौ – कक्षा १२ मा पढ्ने युवतीहरुको यौन सम्बन्धको समस्याले भारतीय अभिभावकहरु अत्याधिक समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले यौनको विषयमा शिक्षा नदिएकै कारण यो समस्या भोग्नु परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यौनका विषयमा शिक्षा नदिएकै कारण ७५ प्रतिश्त युवतीहरुले पढाईकै समयमा सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध कायम राख्ने गरेको तथ्याङ्कमा...